SENTAfrica and LIVINGWAY IMFUNDO » Abantu
Livingway weBhodi Labaphathiswa
Yunus Banda – KWATHUNYELWAAfrica omele Malawi futhi umqondisi LIVINGWAY IMFUNDO
Yunusu kuyinto Umfundisi we Eligcwele Gospel Church eMalawi futhi Umholi womphakathi an lisebenza futhi benamasu othatha ikhomishana ukuthatha ivangeli kukho konke okudaliweyo kakhulu. Umsebenzi wakhe kuhlanganisa kokuba umfundisi wabo Khwidzi Full Gospel Church likaNkulunkulu nangenxa eminyakeni emihlanu edlule ubelokhu eyisisebenzi yesikhathi esigcwele SENTAfrica.
Uye waqinisekisa ukuthi LIVINGWAY IMFUNDO ubhalisile njengendlela Non-Governmental Organisation zomthetho (NGO)eMalawi futhi akha ukwesekwa salokhu nhlangano ezikoleni. Futhi umphathi yezinye KWATHUNYELWA amaphrojekthi.
Jamie Jamieson – UMqondisi of KWATHUNYELWAAfrica futhi LIVINGWAY IMFUNDO
Jamie wasungula KWATHUNYELWAAfrica nomkakhe uJane futhi uye wamisa LIVINGWAY IMFUNDO nge Yunusu. Uye wafundisa e-UK, Greece futhi wasebenza njengendlela uthishanhloko e-Addis Ababa, Ethiopia. Ubelokhu nomqeqeshi uthisha eNingizimu Afrika futhi Zambia. Ngenkathi esebenza ngokuzithandela Service Overseas (VSO) ayesebenzela ukusekela hlelo uthisha-abaqeqeshi ukuqeqeshwa in Ethiopia. Usuke okwamanje siphezu doctorate in Education.
Celestine CHIZENGA – Usihlalo Trustees for LIVINGWAY IMFUNDO kanye Project Imenenja for Ukuqasha wokwakha
Chizenga nguye umphathi project for the Ukuqasha Isikhungo othisha 'futhi usihlalo we-trustee. He is a sebutho umhlalaphansi kanye Umbazi. Intshiseko yakhe for the project wamanje, umsebenzi wokunikezela KWATHUNYELWAAfrica futhi LIVINGWAY IMFUNDO iye kakhulu baziswa ngonyaka odlule.
Eunice Banda - Trustee for LIVINGWAY IMFUNDO
Eunice kuyinto unkosikazi Yunusu, umama wezingane ezintathu futhi umphathiswa of LIVINGWAY IMFUNDO. Yena abukhali ukuthatha indima kathisha uye ngaphambili wayenikela ngezinkonzo zakhe ezikoleni kanye ukusekela KWATHUNYELWAAfrica futhi Ukuqasha. Yena uthemba ukuqala ukuqeqesha njengomfundisi nje lapho can.
Davies – Trustee for LIVINGWAY IMFUNDO
Davies ungumholi womphakathi esihlonishwayo, uyise Eunice yena manje umphathiswa for LIVINGWAY IMFUNDO.
Uye wanikeza iseluleko wabasiza kakhulu Ukuqasha in yokufuna esizeni at Chitipi futhi uyaqhubeka esiza ukuqondisa imithandazo wesonto lendawo maqondana nomsebenzi owenziwayo.
CHRISTINA – Trustee for LIVINGWAY IMFUNDO
Christina iye yathonya ukuphila kwabaningi kuleli qembu trustees futhi kuletha umqondo kanye nokuhlakanipha esibalulekile iqembu.
Useke belulekwa Yunusu nabanye iminyaka eminingi. Yena uyaqhubeka ukusebenza Salima njengoba umqondisi for the Mission isina.
PONTINO – Trustee for LIVINGWAY IMFUNDO
Pontino kuyinto ngumfundisi umphathiswa for LIVINGWAY IMFUNDO
Pontino kuyinto ngumfundisi LWE trustee. Futhi inkulumo esikoleni Full Gospel Church Bible.
Pontino uhlala 268 km away from Chipoka lapho LWE esebenza kodwa ayikaze aphuthelwe umhlangano nabanye amalungu ebhodi. Lapho Pontino umlomo wakhe, ulindele amazwi okuhlakanipha kanye izingcezu omuhle kakhulu izeluleko. Pontino nalo wusihlalo Kasungu District Abefundisi ahambisanayo.
ALEX – Trustee for LIVINGWAY IMFUNDO
Alex kuyinto uthisha kanye umphathiswa for LIVINGWAY IMFUNDO
Wazihlanganisa efundisa Ministry in 1995, Manje ufundisa at Thugulu esikoleni Primary okuyinto 5 km entshonalanga LWE koMfundisi Centre and Guest House at Chitipi. Waba LWE yilungu in 2012, November, futhi yakhetha ukuba LWE uthisha ebalulekile. Alex wabe emisiwe ngokusebenzisa zokuvota ukuze abe LWE Board of Trustee ilunga ngoMashi. 2013 futhi ekugcineni ukuba abe uNobhala LWE Board ngoDisemba 2013.
Felix- Trustee for LIVINGWAY IMFUNDO
UFelix iyinhlangano uthisha Head kanye umphathiswa for LIVINGWAY IMFUNDO
UFelix iyinhlangano lokuxoxa enkulu futhi uzimisele ukwenza esikoleni sakhe isibonelo esihle sendlela amagugu LIVINGWAY IMFUNDO kungenziwa bakwenze.